Bitcore စျေး - အွန်လိုင်း BTX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitcore (BTX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitcore (BTX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitcore ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BTX – Bitcore
Market ကဦးထုပ်: $6 308 888.00
volume_24h_usd: $592 533.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitcore တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitcore များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitcoreBTX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.264BitcoreBTX သို့ ယူရိုEUR€0.223BitcoreBTX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.202BitcoreBTX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.24BitcoreBTX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.34BitcoreBTX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.66BitcoreBTX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.84BitcoreBTX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.982BitcoreBTX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.349BitcoreBTX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.369BitcoreBTX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.85BitcoreBTX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.04BitcoreBTX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.42BitcoreBTX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹19.74BitcoreBTX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.44.51BitcoreBTX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.362BitcoreBTX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.404BitcoreBTX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.19BitcoreBTX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.83BitcoreBTX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥28.19BitcoreBTX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩312.68BitcoreBTX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦102.15BitcoreBTX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽19.31BitcoreBTX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.24
BitcoreBTX သို့ BitcoinBTC0.00002 BitcoreBTX သို့ EthereumETH0.000687 BitcoreBTX သို့ LitecoinLTC0.00485 BitcoreBTX သို့ DigitalCashDASH0.00291 BitcoreBTX သို့ MoneroXMR0.00296 BitcoreBTX သို့ NxtNXT20.57 BitcoreBTX သို့ Ethereum ClassicETC0.0389 BitcoreBTX သို့ DogecoinDOGE76.09 BitcoreBTX သို့ ZCashZEC0.0032 BitcoreBTX သို့ BitsharesBTS8.12 BitcoreBTX သို့ DigiByteDGB8.44 BitcoreBTX သို့ RippleXRP0.936 BitcoreBTX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00909 BitcoreBTX သို့ PeerCoinPPC0.875 BitcoreBTX သို့ CraigsCoinCRAIG120.15 BitcoreBTX သို့ BitstakeXBS11.24 BitcoreBTX သို့ PayCoinXPY4.6 BitcoreBTX သို့ ProsperCoinPRC33.08 BitcoreBTX သို့ YbCoinYBC0.000142 BitcoreBTX သို့ DarkKushDANK84.62 BitcoreBTX သို့ GiveCoinGIVE571.12 BitcoreBTX သို့ KoboCoinKOBO60.07 BitcoreBTX သို့ DarkTokenDT0.243 BitcoreBTX သို့ CETUS CoinCETI761.6
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:15:02 +0000.